Dawlada Ethiopia Oo Haween Muslimiin Ah U Magacwaday Guddoomiyeyaasha… | Gabiley News Online
Dawlada Ethiopia Oo Haween Muslimiin Ah U Magacwaday Guddoomiyeyaasha…
Labada aqal uu leeyahay dalka itoobiya ayaa taariikhda marki ugu horreysay loo doortay laba gabdhood oo Muslimiin ah. Gabdhaha waxay kala hoggaamin doonaan Golaha wakiillada shacabka iyo Golaha Federeshiinka ee dalka Itoobiya.
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Shacabka waxaa loo doortay Mufariyat Kaamil oo ka soo jeedda qowmiyadda Silte oo ka mid ah qowmiyadaha shucuubta Koonfureed.
Mufariyat waxay horay u soo qabatay xilal ay ka mid yihiin Wasiirka arrimaha haweenka iyo la taliyaha arrimaha jinsiga ee ra’iisal wasaaraha.
Sida oo kalana Guddoomiyaha Golaha Federeedhiinka waxaa loo doortay Kheyriya Ibraahim oo ka soo jeedda qowmiyadda Tigreega.
Golaha federeeshiinka wuxuu ka kooban yahay 112 xildhibaan oo laga soo kala xulo qowmiyadaha dalka magacaabidna ku yimaadda.
Ra’iisal wasaaraha cuusub Abiy Axmed oo ka soo jeeda qoys Muslimiin ah( balse aan isagu Muslim ahayn) ayaa wuxuu billaabay inuu ka qayb galka Muslimiinta uu sare u soo qaado